KAMIAO MPITONDRA OMBY NIVADIKA TAO AMBATO-BOENY : Olona 1sy omby 7 no maty
Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray no niseho tao amin’ny Fokontanin’Ambaliha Kaominina Ambondromamy Distrikan’Ambato- Boeny Rn6 ny fiandohan’ny herinandro lasa teo ka olona iray miampy omby miisa fito no namoy ny ainy tamin’izany. 21 septembre 2017
Araka ny tatitra voaray avy amin’ny mpitandro filaminana dia kamiao mpitondra omby Mercedes benz Imm avy any Vohemar hihazo an’i Marovoay no nivadika . Marihana fa omby niisa 29 no tao anatiny ka ny fito tamin’ireo no maty tsy tra-drano avy hatrany.
Olona iray kosa no voalaza fa naratra mafy ary niezahana noentina tao amin’ny Hopitaly Mampikony saingy nindaosin’ny fahafatesana ihany ny farany.
Notazomina ao amin’ny Borigadin’Ambondromamy ilay rangahy mpamily raha ny loharanom-baovao ihany ka misokatra ny fanadihadiana amin’izao fotoana izao.